Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Zinc | Waxyaabaha xiisaha leh ee ku saabsan walxaha kiimikada
Zinc waa bir bir-cagaaran oo qalin ah oo ku jirta unugga 30-aad ee miiska nidaamka xilliyeed. Waxaa la ogyahay inay tahay macaadin muhiim ah oo ka caawisa inay enzymes-ka jirka ku sii shaqeeyaan, yaraanshaha zinc wuxuu gaabin karaa koritaanka wuxuuna hor istaagi karaa nidaamka difaaca jirka. Maanta, inta badan zinc-ka ay soo saaraan waxaa baabi'iya warshadaha galvanized. Waa kuwan 10 xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan zinc - birta labaad ee ugu badan ee jirka aadanaha ka dib birta.
Goobta Zinc ee Jadwalka Nidaamka Muddada ah
10 Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Zinc
1. Zinc waxaa sidoo kale loo yaqaan magaca ganacsiga "spelter". In kasta oo zinc ay bini aadamku isticmaali jireen ilaa waqtiyadii hore, haddana ma ahayn illaa 1746 in farmashiyaha reer Jarmal ee Andreas Marggraf uu ka go'doomay macdanta calamine isagoo kuleylinaya kaarboonka macdantaas.
2. Paracelsus - dhakhtar Swiss Jarmal ah, alchemist iyo xiddigisyahan oo soo helay zinc, magaceedu wuxuu ka yimid erayga Jarmalka "Zinn" oo macnaheedu yahay "tin". Waa birtii ugu horreysay ee laga soo saaro Hindiya qarnigii 12aad. Si kastaba ha noqotee, Yurub waxay soo heshay birahaan dabayaaqadii qarnigii 16aad.
Zinc waa bir bir-cagaaran
3. Zinc waa cunsurka 24aad ee ugu badan qolofta dhulka. Waa cunsurigii 30-aad ee ugu badan ee ku jira biyaha badda.
4. Ma ogtahay in in ka badan kala badh zinc la isticmaalay loo isticmaalo dajinta biraha kale sida birta iyo birta. Ka sokow, zinc waxaa sidoo kale loo isticmaalaa in lagu daro macdano kale sida naxaas (naxaas - zinc) ayaa la isticmaali jiray ilaa waqtiyadii hore. Intaa waxaa dheer, zinc alloys waxaa loo isticmaalaa noocyo kala duwan oo codsiyo ah sida dhuumaha, tuurista dhinta qaybaha baabuurta iyo dareemayaasha. Zinc wuxuu kaloo kujiraa muraayadaha qorraxda, boomaatada, shubka, rinjiga iyo xitaa matoorka gantaalada nooca ah.
5. Kahor 1982, si loo sameeyo qadaadiic Mareykan ah, waxyaabaha ku jira naxaasta waxay ahaayeen 95% iyo zinc 5%. Wixii ka dambeeyay 1982, lacagta qadaadiicda ah waxaa badanaa laga sameeyay zinc oo leh 97.5% Zinc iyo 2.5% naxaas maxaa yeelay zinc wuu ka raqiisanaa naxaasta.
Wixii ka dambeeyay 1982, lacagta qadaadiicda ah waxaa badanaa laga sameeyay zinc oo leh 97.5% Zinc iyo 2.5% naxaas maxaa yeelay zinc wuu ka raqiisanaa naxaasta.
6. Zinc waa macdan nafaqeysan oo muhiim u ah aadanaha iyo xoolaha. Waa birta labaad ee ugu badan raadad laga helo jirkeena. Dadka qaangaarka ah, zinc wuxuu ka kooban yahay 1.4 ilaa 2.3 garaam.
7. Zinc wuxuu ka caawiyaa habdhiskeena difaaca ladagaalanka bakteeriyada iyo fayraska, halka unugyadeena ay ubaahan yihiin zinc si ay uga caawiyaan dhisida DNA. Jidhkeenu wuxuu ubaahan yahay zinc koriin iyo koriimo sax ah, taas oo aad muhiim ugu ah caruurta iyo inta uurka lehi. Yaraanta zinc waxay sidoo kale noqon kartaa cunsur wax ku biirisa naafonimada aragga ee la xiriirta da'da.
Zinc wuxuu ka caawiyaa nidaamkayaga difaaca inuu la dagaallamo bakteeriyada iyo feyrasyada soo weerara halka unugyadeena ay u baahan yihiin zinc si ay uga caawiyaan dhisida DNA.
8. Waxaad zinc ka heli kartaa cuntooyinka qaarkood sida hilibka cas ee caatada ah (hilibka lo'da, wanka iyo beerka, cuntooyinka badda sida lowska iyo aargoosatada); Badarka, miraha, digirta, lowska iyo yicibta dhammaantood waa ilo wanaagsan haddii lagu beero carrada hodanka ku ah zinc.
Waxaad zinc uga heli kartaa cunnooyinka qaarkood sida hilibka cas ee caatada ah (lo'da, wanka iyo beerka, cuntada badda sida lowska iyo aargoosatada); Badarka, miraha, digirta, lowska iyo yicibta dhammaantood waa ilo wanaagsan haddii lagu beero carrada hodanka ku ah zinc.
9. Zinc carbonate waxaa lagu cadeeyay kaniiniyada ugu da'da weyn ee la rumeysan yahay in lagu daaweeyo xanuunka indhaha, waxaana laga helay markab Roman ah oo sii quusayay sanadkii 140 BC.
10. In kastoo zinc uu yahay sharuud lama huraan u ah caafimaadka wanaagsan, zinc-ka xad-dhaafka ahi wuxuu noqon karaa mid waxyeello leh, kana hortaga naxaasta iyo nuugista birta Lacagta Mareykanku waxay ka samaysan tahay 97.5% zinc waxaana jirtay dhacdo sumowga zinc ka dib markii ay cuneen lacagta iyo lacagta dadka iyo eeyaha.
Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan helium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan lithium Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Beryllium Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Kaarboonka Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Nitrogen Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Ogsijiin Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Neon Xaqiiqooyin Xiiso Leh Oo Ku Saabsan Fluorine Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan chromium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan birta naxaasta ah Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Gallium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Nickel Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Cobalt Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Birta Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Manganese Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Vanadium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Titan Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Scandium Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan Kaalshiyamka Xaqiiqooyin xiiso leh oo ku saabsan hydrogen - waa curiyaha ugu fudud miiska xilliyeed.